N'oge na-adịbeghị anya, ọnụ ahịa ngwaahịa ndị metụtara yinye ụlọ ọrụ kemịkalụ phosphorus ka na-arị elu. Dị ka data Baichuan Yingfu, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ngwaahịa na-ahụ maka ngwa ahịa wepụtara, nhota nke phosphorus na-acha odo odo na Septemba 15 bụ 60082 yuan / ton, nke guzoro na ọkwa integer nke ...
Mbadamba ụrọ Clo2 500kg n'efu na FELIXSTOWE Port of UK
Ugbu a, anyị nwere 500kg chlorine dioxide mbadamba (1g / mbadamba) na FELIXSTOWE Port of UK. N'ihi na ndị ahịa adịghị ugbu a (enweghị ike na-esi na ya ruo ọtụtụ ọnwa), ugbu a, anyị chọrọ inye ya ndị ọzọ ahịa n'efu. Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere mmasị, biko kpọtụrụ anyị ngwa ngwa site na ema...
Nkwadebe nke procaine & procaine hcl
Procaine base CAS: 59-46-1 Ọdịdị: ọcha crystalline ntụ ntụ na-agbaze (ebe esi): 59 ~ 62 ℃ Usoro ihe omimi: c13h2on2o2 Molecular arọ: 236.31 Procaine hcl CAS: 51-05-8 Ọdịdị: ọcha crystal ma ọ bụ crystalline ntụ ntụ. ebe (ebe esi): 154 ℃ ~ 157 ℃ Molecular ụdị...
Ihe mgbakwunye Melatonin na-akwalite ụra
site admin na 21-06-22
Ọrụ a maara nke ọma nke melatonin bụ imeziwanye ogo ihi ụra (doseji 0.1 ~ 0.3mg), belata oge edemede na oge ihi ụra tupu ụra, melite ogo ụra, belata ọnụ ọgụgụ nke edemede n'oge ụra, belata ọkwa ihi ụra, ogologo oge. oke ụra miri emi, na ala ...
Ememme Boat Dragọn - na-achọ ahụike kachasị mma!
Ememme Boat Dragọn ga-amalite site na Satọde a wee were ụbọchị 3 ruo Mọnde. Anyị ga-amalite ọrụ na Tuzdee ka ezumike gachara. Anyị na-achọ gị ahụ ike niile! Ememe n'ime afọ nke 2021. 1, New Year's Day: Jenụwarị 1-3, 2021 2, Spring Festival: February...
New mmepụta ahịrị nke procaine base na cas 59-46-1
Hebei Guanlang Biotechnology Co., Ltd. tọrọ ntọala na 2007, emi odude ke Shijiazhuang obodo nke bụ isi obodo nke Hebei Province na hub ngalaba n'etiti Beijing Tianjin na Hebei na nwere uru nke adaba njem. Ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ kemịkalụ dị elu nke ọgbara ọhụrụ na nyocha & am ...